रक्षक नै भक्षक भए पछि - Pabil News
अशोज १३ गते, २०७७ - १७:२७
घटना नं १ ः भर्खर उनी छ वर्षकी पुगिन । चञ्चले स्वभाव, वालशुलभ चेहरा लाग्थ्यो उनलाई केही भएकै छैन । उनकी आमाको काखमा सानो भाई थियो । उनलाई एउटा हातले डोर्याउदै उनी आएकी थिईन । उनलाई काखमा लिदै मैले उनको नाम सोधे । उनले सजिलै आफ्नो नाम भनिन् । मैले विस्तारै उनलाई घटनाको बारेमा सोधे । सायद अप्ठेरो के हो ? लाज के हो ? पीडा के हो ? थाहै नपाउने उमेर भएर होला उनले सरर आफूलाई भएको कुरा भनिन् ʺ बाबा, ममी म र भाई संगै सुतेको थियौं । राती बाबाले मेरो सुसु गर्ने ठाउँमा बाबाको सुसु गर्नेले घोचिदिनु भयो । मलाई कस्तो दुख्यो अनि म रोए ।
म रोएँ पछि ममिले थाहा पाउनु भयो अनि बाबालाई गाली गर्नुभयो । मलाई ममिले आफु पट्टि सुताउनु भयो । म रातभरी दुखेर रोएँ । सुस गर्दा अहिले नी दुख्छ ।“ एउटा ५ वर्षको अवोध वालिकाले आफूमाथि भएको घटनाको बारेमा सुनाईरहँदा छाति फुट्ला जस्तो भयो । अनि आमा पट्टि फर्के म “हामी इट्टा भट्टामा काम गर्छौ । पहिलाको श्रीमानले सधै जाँडरक्सि खाने कुटपीट गर्ने गरेकाले छोडेर भागे । घरबाट हिड्दा नानी १ वर्ष जतिको मात्रै थियो । सानो बच्चा बोकेर धेरै ठाउँमा भौतारिए । के गर्ने आइमाई मान्छे एक्लै देखेपछि जसले नी हेप्ने, फाइदा लिन खोज्ने बाँच्ने गाह्रो भयो । त्यसपछि बाबुको बाबासंग भेट भयो । राम्रो गर्छु छोरी नी स्विकार गर्छु भने ,एक्लै बाँच्न गाह्रो भएकोले आतिएको थिए म । लु न त भनेर विवाह गरे । राम्रै थियो । एउटा छोरा पनि जन्मियो । एउटा कोठा भएकोले हामी लाईनै सुत्थ्यौं । बाबुलाई मैले च्यापेर सुत्थे, नानीलाई बाबाले । त्यो राती म धेरै थाकेको थिए । उसले मलाई सम्बन्ध राख्न भनिरहेको थियो । मलाई मनै थिएन । मैले नाई भनेर गाली गरेर बाबु च्यापेर सुते । म निदाएछु । एक्कासी नानी रोएपछि व्युझिए ।
व्युझिदा नानी नाङ्गै थिई, बाउ चाहिको नी तल नाङ्गै थियो । बुबाको सुसुले मलाई घोच्यो भनेर नानी रोई । नानीको तल्लो शरिर सबै भिजेको थियो । अवाक भए । छोरीलाई ताने , बेसरी रोए, गाली गरे । भोली पल्ट नानीले छिमेकीहरुलाई भनिछ सबैले गाली गरे । प्रहरीकोमा जाउँ भने । प्रहरीलाई खबर गरिदिए र अनि आएको । के गर्र्ने २ , २ वटा बच्चा छ कमाएर पाल्ने उही हो, ऊ जेल परे हाम्रो विजोक हुन्छ । म कसरी उसलाई मुद्धा हालु ? म त मुद्दा हाल्दिन । जे भयो भयो । ”
घटना नं २ ः प्रहरीकोबाट फोन आयो म्याडम एकजना ८,९ वर्षको नानी छ, बाउले नै जबरजस्ती करणी गरेको रहेछ , एकजना भाउजु पर्नेले जाहेरी दिनु भयो उहाँको नी सानो बच्चा छ रे भनेर जानु भयो , यो नानीको कोही छैन सेफ हाउसमा राख्नु पर्र्छ जस्तो छ । मैले पठाईदिनुहोस् न हामी राख्छौं नी भने । केही बेरमा प्रहरीले सानी बच्चीलाई लिएर आयो । गाडीबाट बोकेर झार्यो । मैले सोधे हिड्न सक्दैन ? उसलाई धेरै नै गाह्रो भको छ । हामीले भित्र लग्यौं । नानीको अवस्था हेर्दा कति दिन देखि खान नपाएको, धेरै थकित र विरामी जस्तो देखिन्थ्यो । खाजा खुवाएर सुत्न भने । केही छिन पछि सेफ हाउसको बैनिले नानीलाई धेरै नै ज्वरो आएको भन्नु भयो । गएर हेर्दा उनलाई १०२ ज्वरो थियो ।
हामी आतियौं साँझ भैसकेको थियो । फेरी कोविडको महामारी । लकडाउनको अवस्था । हामीले हतार हतार हस्पिटल लग्यौं । इमरजेन्सीमा राखियो । ज्वरो वेस्सरी थियो । नानीको यौनाङ्ग क्षतिविक्षत रहेछ । ज्यानभरी विमिरा नै विमरा । खुट्टा काटेको । सायद यही घाउँको पीडाले होला ज्वरो आएको भन्ने भयो । नानीलाई भर्ना गरेर २ दिन राख्यौं । उनी उठेर हिड्न सक्दिनथिन । पिसाब आएपछि रुन्थिन, सायद पिसाब फेर्दा उनको घाउ दूख्दो हो । उनी ३, ४ वर्ष हुँदा आमाले छोडेर गएकी रहिछिन् । आमाको अनुहार पनि याद छैन उनलाई । बाबुले हरेक रात उनलाई सुत्न नदिने रहेछ । उनको यौनङ्ग खेलाउने, आफ्नो लिङ्ग चलाउन लगाउने । रातभरी विभिन्न माध्यमबाट उसले यौनसन्तुष्टि लिने गरेको रहेछ ।
नानीलाई यो कसैलाई नभन्नु भनिस भने मार्दिन्छु भनेर धम्कि दिने रहेछ । नानीले छिमेकीहरुलाई भनेकी पनि रहिछिन तर कसैले बोल्ने हिम्मत गरेन । पहिला पहिला बाहिर बाहिर चलाउने गरेकोले उनलाई त्यत्ति पीडा भने भएको थिएन तर त्यो रात उनको यौनाङ्गमा बाबुले लिङ्ग पसाएर जबरजस्ती करणी गर्यो । उनी रोइन कराईन तर पनि उसले छोडेन । भोलीपल्ट नजिकै रहेको पुलिस चौकी गएर नानी आफैले प्रहरीलाई अक्कल मेरो बाबालाई थुनिदिनु न मेरो बाबाले मलाई यसो गह्रो भनेर रोएपछि घटना बाहिर आयो ।
घटना नं ३ ः साँझ भैसकेको थियो, प्रहरीले एकजना १४,१५ वर्षको नानीलाई सेफ हाउसमा लिएर आए । नानीघर छोडेर केटासंग भागेकी रहिछिन् भेटेर लेराको, अभिभावक आएका छैनन् भोली आएसी बुझाउने आज राखिदिनु पर्यो भनेर छोडेर जानु भयो । बेलुका नानीले खाना खान मानिनन् । मलाई लाग्यो यीनलाई अलिकति संझाउनु पर्यो किन भागेको भनेर भन्ने लागेर कुरा गर्न थाले । उनी बेस्सरी रोइन र भनिन् “ दिदि मा बाँच्नै नसक्ने भएर भागेको , कतिदिन बाउ स्वास्नी भएर बाँचु ? मलाई कहिले देखि बाउले जबरजस्ती गर्यो त्यो थाहा छैन तर म ५ वर्ष हुँदा देखि मलाई याद छ । कति पटक त्यो गनेर साध्यै छैन ।
हरेक २,३ दिनमा मैले बाउसंग सुत्नु पर्थ्यो । आमाले पनि धेरै पटक देख्नु भएको छ । पहिलो पटक देख्दा आमाले बाउलाई गाली गर्नुभयो । म अध्यक्षको मा जान्छु र भन्छु भनेर आमा हिड्नु भयो तर बाउले ठुलो स्वरले कराएर मारिदिन्छु विजोक बनाईदिन्छु भनेपछि आमा जान सक्नु भएन । त्यसपछि आमाले वास्ता गर्न छोड्नु भयो । आमा सुतेपछि मसंग आएर बाउ सुत्थो, आमा कतै काम गर्न जाने वित्तिकै बाउले मलाई त्यसो गथ्र्यो । मलाई थकाई नलाग्ने औषधी भनेर खुवाउँथ्यो तर त्यो बच्चा नबस्ने औषधी रहिछ त्यो पनि आमाले भनेपछि थाहा पाए । आमाले पनि सधै वाउको स्वास्नी, सौता भनेर गाली गर्नुहुन्थ्यो । मैले २ पटक आत्महत्या गर्ने कोसिस गरे तर सकिन । अति भएपछि गाउँमा काम गर्न आएको बाहिरको एकजना केटासंग भागे । मैले उसलाई देखेको पनि एक हप्ता मात्रै भएको थियो । बाउको स्वास्नीहुनु भन्दा बरु भाग्छु भनेर भागेको हो ।
यी केही प्रतिनीधि घटना मात्रै हुन् । तर यस्ता थुप्रै घटना छन् जो आफ्नै बाउबाट छोरीहरु जबरजस्ती करणीको शिकार भएका । पत्याउन पनि गाह्रो हुन्छ, सुन्न पनि सकिदैन । उनीहरुको कथा सुनिरहँदा छाती गह्रौ हुन्छ, सबै पुरुषसंग घृणा लागेर आउँछ । बाबु शब्द त्यक्ति सम्मानित शब्दप्रति घृणा लाग्छ । आखिर कसरी आफ्ना अवोध छोरीहरु प्रति पनि यौनआंकक्षा आउँछ ? श्रीमतीसंगै हुँदा समेत छोरीहरु प्रति त्यस्तो भावना कसरी पैदा हुन्छ ? कहाली लाग्छ संझदा र सुन्दा पनि ।
बुबा जो संरक्षक हो , जसले आफ्ना छोरा छोरीको भविष्य सुखका लागि आफ्नो सम्पूर्ण जीवन खर्च गर्छ तर त्यही बाउको मनमा यस्ता घृणित भावना कसरी आउन सक्छ ? कसरी विश्वास गर्ने हरेक छोरीले आफ्नो बाउलाई ? अनि समाज तिनै बाउको पक्षमा उभिन्छ र भन्छ यो हुनै सक्दैन । यो आरोप मात्रै हो , यस्तो पनि हुन्छ र ? अनि निर्धक्क हामीलाई गाली गर्छ । महिला अधिकारकर्मीको काम छैन, डलर खानलाई घटना बनाउँछन् । घटना उठाए बापत यिनीहरुले पैसा पाउँछन् , आफु चरित्रहिन छन् अनि अरुको चरित्र पनि रहन दिदैनन् आफ्नो घर विगारेर अरुको घर पनि विगार्छन……………………….. अरु त तपाईहरुले नै सुनिहाल्नु भएको छ के के भन्छन् भनेर । हो हामी अवोध वालिकाहरुको चित्कारलाई निमोठेर छोपिएको त्यो इज्जतलाई इज्जत संझनौ र बाहिर ल्याएर च्यात्न खोज्छौं । समाज कहिलै यी निर्दोश वालिकाको पक्षमा भएन । १७ वर्षको यो अनुभवमा एउटा पनि त्यस्तो फोन आएको छैन जुन यी वालिकाहरुको न्यायका लागि सहयोग पुगोस् । आएको छ त त्यो मुद्दा दर्ता नगर्नका लागि, पैसा दिएर छोड्नका लागि । अहिले देशमा संघिय संरचना लागु भएको छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार छ । लागेको थियो अब यी वालिकाहरुको न्याय, लालनपालन र शिक्षाका लागि गाउँको सिंहदरबारले केही गर्ला तर झन सिंहदरबार त उही समाज जस्तै नानीको विपक्षमा पो रह्यो त । हामी जनप्रनिनिधीलाई नसोधी को हो त्यो केस दर्ता गर्ने, हाम्रो अनुमति नलिने यस्तै यस्तै । अनि प्रहरी वा हामीलाई धम्क्याउन यो जनप्रतिनिधीको विल्ला पावरफूल बनेको छ ।
एउटा पनि कुनै घटना छैन जहाँ जनप्रतिनिधिले मेरो नगरको वा गाउँको घटना रैछ म वालिकाको पालन पोषण र शिक्षाको लागि यसो गर्छु भनेको होस् । हामीले यो कुरा उठायौं भने उहाँहरुले भन्नु हुनेछ हामीलाई थाहै छैन, कस्ले भनेको छ र ? आफ्ना हरेक नागरिकका घरघर सम्म सरकारका प्रतिनीधि पुग्छन्, हरेक दुख सुखमा सरकार हुन्छ भनेर संघियता लागु भएको हो , गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आएको हो तर यो सिंहदरबारलाई बाटो खन्ने भन्दा बाहेक अरु कुराले कहिलै छोएन र छुन सकेन । यी अवोध वालिकाहरुको पीडाले त झन अलिकत्ति पनि छोएको छैन ।
आफ्नै रक्षक भन्ने बाबु नै भक्षक भएपछि अरु कस्को आशा गर्ने यिनीहरुले । सरकारसंग कुनै त्यस्तो नीति तथा कार्यक्रम छैन जसले यस्ता पीडित वालिकाहरुको भविष्यको बारेमा सोचोस । आफ्नो अभिभावक अभिभावक हुन सकेन राक्षस भयो कम्तिमा यिनका लागि राज्यले त अभिभावकत्व लिन सक्थ्यो नी तर खै यसको बारेमा कस्ले बुझाईदिने र सरकारलाई ? प्रधानमन्त्रि र मन्त्रिहरुलाई ?
२०७७ असोज १३ गते प्रकाशित
तिहार नेपालीहरुको दोस्रो महान पर्व
नेपालको समर्थन खोज्दै कतार
कक्षा १२ को नतिजा पुस १५ भित्र
बागमती प्रदेशका ५१ वटा स्थानीय तहहरुमा आधारभूत अस्पताल बन्ने
धादिङका पाँच स्थानीय तहहरुमा आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास
नागरिकको गुनासो सुन्न सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम